लकडाउन खुकुलो बने पनि बेलायत कोरोनामुक्त भइसकेको छैन: डा. निर्मल अर्याल | Everest Times UK
बेलायतमा लकडाउन खुल्दै जान लागेको छ । सरकारले एलर्ट लेभेल घटाएर ३ मा झारेको छ । यसको मतलब हामी पहिले जति सावधान हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
सरकारले ल्याएको ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ्ग योजनाले कसरी काम गर्छ ?
बेलायत सरकारले स्कूलमा संचालन निर्णयमा विशेष सावधानी अपनाएको जस्तो लाग्छ । केही कक्षाहरु (रिसेप्सन, इयर १,६, १०, १२) बाहेक अरु सेप्टेम्बरबाट मात्र खुल्ने जनाएको छ । स्कूलमा संक्रमणको खतरा निकै कम भएपनि हुँदै नभएको भने होइन । अभिभावकहरुलाई पनि छोराछोरी पठाउनै पर्ने अनिवार्य गरिएको छैन । सरकारको निर्देशिका अनुसार नै गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ जस्तो लाग्छ ।